Pigtails, ပန်း, ဆံပင်, ကျောက်, ဂရိ, ဆံပင်, အလင်း, အဆင်းလှ, Quad ၏တိုတောင်းသောစတိုင်, မင်္ဂလာဆောင်ညဦးယံ, - အနားကွပ်နှင့်အတူဆံပင်ပုံစံတွေ
အနားကွပ်နှင့်အတူဆံပင်ပုံစံတွေ - တိုတောင်းသောကာလပတျလုံးနှင့်အလတ်စားဆံပင်အတွက်အကောင်းဆုံးစိတ်ကူးများ
သူမ၏ဆံပင်ထဲမှာစတိုင်အလှဆင်အမြဲတမ်းပုံရိပ်မူရင်း, မူလအစနဲ့ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုထိပါစေ။ ထိုသို့သောဇာတိအမျိုးသမီးဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ဦးချင်းစီစတိုင်ကိုအလေးပေးသော, သငျသညျအရာကြွင်းလေထဲကနေထွက်မတ်တပ်ရပ်ကိုကူညီပေးပါတယ်။ နှင့်ခေတ်မီဖက်ရှင်ဆံပင်ပုံစံတွေအတွက်ရေပန်းအစားဆုံးတို့တွင်အနားကွပ်နှင့်အတူထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြသည်။
ဆံပင်တီးဝိုင်း - ဆံပင်စတိုင်များ
ယနေ့အထိ, စတိုင်တစ်ခုအလွန်မတူညီရွေးချယ်ရေးရှိ အမြိုးသမီးမြားရဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်း ။ ဒီဇိုင်နာများဆိုကြက်သွန်နီကိုဖြည့်မည်ကိုအထူးသဖြင့်ညဦးယံအချိန်လက်ရာမြောက်သောထုတ်ကုန်နေ့စဉ် wear များအတွက်မော်ဒယ်နှင့်စွယ်စုံဒီဇိုင်းကိုဆက်ကပ်။ လှပသောကွင်း၏အားသာချက် frame မျက်နှာရပ်နှင့်ပုံပန်းသဏ္ဌာန်သပ်သပ်ရပ်ရပ်နှင့်သပ်ရပ်စေသည်အားလုံးသောသော့ခလောက်, ခူး။ ထိုကဲ့သို့သောဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက်တင်ဆက်သည့်အနားကွပ်ထဲကနေနှင့်အများဆုံးခေတ်မှီဆံပင်ပုံစံတွေ:
beam ။ ဒီ option ကလူအပေါင်းတို့သည်ဆံပင်စုဆောင်းရန်ကူညီပေးသည်, ဒါပေမယ့်သူကအကောင်အထည်ဖေါ်ရန်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ အဆိုပါရောင်ခြည်ထိပ်သို့မဟုတ်ဘက်မှာ, ဒါမှမဟုတ်နောက်ကျောမှာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းတဲ့ stack ပျော်စရာစေရန်တစ်ဦးကလှပသောဆက်စပ်ပစ္စည်း။
shell ။ ကိုတင်သော၏ဤနည်းလမ်းကိုတစ်တင်းကျပ်စားဆင်ယင် code ကိုစောငျ့ရှောကျတဲ့သူမိန်းမတို့အဘို့အထူးသဖြင့်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အလုပ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုခေါင်းပေါ်မှာသပ်သပ်ရပ်ရပ်အလှဆင်၏ရှေ့မှောက်တွင်ခွင့်ပြုပါလျှင်မူကား, ဖက်ရှင်ကွင်းထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းအသှငျအပွငျမှေးမှိန်တံ့သောအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု, ပါလိမ့်မယ်။
"Malvinka" ။ elastic သို့မဟုတ် barrette snug နောက်ကျောမှာကပ်လှပသောစီးသောသော့ခလောက်, အမြဲဣတ္နှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းပေါ်လွင်စေပါသည်။ ကွင်းနှင့် တွဲဖက်. ဒီပုံစံတပြင်လုံးကိုပုံရိပ်တွင်ဤအရည်အသွေးတွေကိုဖြည့်စွက်, ပိုမိုနူးညံ့သိမ်မွေ့သောနှင့်သိမ်မွေ့ကြလိမ့်မည်။
ကျစ်နှင့်နားရွက်။ interwoven strands နှင့်အတူအများစုမှာဣတ္ဖြေရှင်းချက်တစ်စုံတစ်ရာစတိုင်အတွက်ပုံရိပ်ကိုအဘို့, ဒါပေမယ့်လည်းအသွင်အပြင်အမျိုးအစားအားလုံးကိုအဘို့မသာ, တစ်လောကလုံးစဉ်းစားနေကြသည်။ မိန်းကလေးလူကြိုက်အများဆုံးအမြဲ hoops နှင့်ပန်းကုန်းခဲ့သည့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, တန်ဆာဆင်တာရှည်ကျစ်ရှိပါတယ်။
လှပသောရှည်လျားသောဆံပင်ကောက်ကောက် stylist သည်သူ၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုအာရုံစိုက်ဖို့ကအကြံပြုနှင့်အတူမိန်းကလေး။ ရှည်လျားသောဆံပင်ကောက်ကောက်ပြီးနောက်အမြဲဣတ္နှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုံစံထည့်သွင်းစဉ်းစားပါပြီ။ သို့သော်ခေတ်သစ်ဖက်ရှင်များ၏လှုပ်ရှားမှုနှင့်တက်ကြွမှုကြောင့်, ကလေး၏နှစ်သိမ့်နှင့်လက်တွေ့သေချာရန်အရေးကြီးပါသည်။ ထိုအခါမျက်နှာကနေဆံပင်ဖယ်ရှားပစ်ရန်လှပသောပုံစံကိုအလေးပေးနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာမှ, အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်တစ်ကွင်း၏ထို့အပြင်ဖြစ်ပါတယ်။ ရှည်လျားသောအနားကွပ်နှင့်အတူဆံပင်ပုံစံတွေကျစ် pigtails နှင့်အတူသို့မဟုတ်မကြာသေးမီရာသီအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောအရာအနည်းငယ်ပေါ့ဆမှုနှင့်အတူ coupled ချောမွေ့ combed နိုင်ပါသည်။
အခြားမည်သူမဆိုတူသောကံကောင်းအလတ်စားအရှည် tresses အတူဖက်ရှင်အမျိုးသမီးတွေ။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ထိုကဲ့သို့သော stack လုပ်ဖို့လွယ်ကူသည်, ဒါပေမယ့် licentiousness ဆုံးဖြတ်ချက်၏အလမ်းအတွက်ဆွဲဆောင်မှုနဲ့စတိုင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့်တက်ကြွများအတွက်အလွန်အဆင်ပြေ နေ့စဉ်သုံးစွဲခြင်း အလတ်စားဆံပင်အဘို့အနားကွပ်-ရော်ဘာတီးဝိုင်းနှင့်အတူဆံပင်ပုံစံတွေစဉ်းစားနေကြသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဆက်စပ်ပစ္စည်းလေးကိုလုပ်ဖော်ပြခြင်းနှင့်မျက်စိ-ဖမ်းဝဲကြည့်ရှုမည်ကြောင်းပုံစံကျော်ရိုးရှင်းစွာဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ သွားဖုံးများအတွက်သပ်သပ်ရပ်ရပ် tucked ကြိုး၏ပုံစံအတွက်တင်ပြဖက်ရှင်စိတ်ကူးများ။ နှင့်ဤနည်းလမ်းကိုတာဝန်မဲ့မျိုးစုံဖြောင့်ဆံပင်ကောက်ကောက် addressing အတွက်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်။
တိုတောင်းသောဆံပင်နှင့်အတူဖက်ရှင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအထူးသဖြင့်ကျဉ်းမြောင်းသောဘဲဥပုံမျက်နှာနှင့်ခံစားချက်မျက်စိသည်မှန်လျှင်, အသံအတိုးအကျယ်ပေးရန်အရေးကြီးပါသည်။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သော pixies သို့မဟုတ်ပုလ်စတိုင်အဖြစ်မော်ဒယ်များရှိပါကကအရောင်ခြားနားငယ်ကွင်းမှာရှာဖွေနေရကျိုးနပ်သို့မဟုတ်ဒဏ်ငွေပုံစံမျိုးနှငျ့အတူရှိ၏။ Quad နှင့် bean ကိုအဖြစ်အနားကွပ်နှင့်အတူထိုသို့သောအတိုဆံပင်ပုံစံတွေ, ကြီးမားတဲ့ finish ကိုအတူပုံမှန်မဟုတ်သောပုံသဏ္ဍာန်တစ်ဦးထက်ပိုဖော်ပြခြင်းနှင့်ကျယ်ပြန့်ဖြည့်စွက်ထုတ်ကုန်သည်။ တိုတောင်းသောဆံပင်ပွင့်လင်းနားကြားသောအားသင်တဦးတည်းဒီဇိုင်းအတွက်ခေါငျးပျေါမှာပုတီးနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေနဲ့သတ်မှတ်ထားလက်ဝတ်ရတနာကောက်လို့ရပါတယ်။
ဒီနေ့ဈေးကွက်ထဲမှာမတူညီတဲ့ပစ္စည်းများကနေဖန်ဆင်းတော်လှပသောလက်ဝတ်ရတနာတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားရွေးချယ်ရေးကကိုယ်စားပြုနေပါတယ်။ အဆိုပါလမ်းကြောင်းသစ်ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်ကျဉ်းမြောင်းသောသပ်သပ်ရပ်ရပ်ပုံစံနှစ်မျိုးလုံးဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဆအနားကွပ်နှင့်အတူမူရင်းကြည့်ဆံပင်။ အလှဆင်သခင်အဘို့အ crystals, ကျောက်, ပန်းပွင့်, အတုအစိတ်အပိုင်းများ, ထည်၏ကွဲပြားခြားနားသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုအသုံးပြုပါ။ အဆိုပါကွင်း၏ပုံသဏ္ဍာန်ဦးခေါင်းပတ်ပတ်လည်စဉ်ဆက်မပြတ်နှင့်စက်ဝိုင်းခြမ်း၏ပုံစံဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ A ကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းလုံလုံခြုံခြုံအချိန်ကြာမြင့်စွာများအတွက်အလှဆင်ရရှိထားသူသောအတွင်းစိတ်ဘက်မှာတစ်ဖြီးအမျိုးအစားသေးငယ်တဲ့အံသွားနဲ့မော်ဒယ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုအမြားဆုံးဖက်ရှင် headbands ကိုကြည့်ပါစို့:
ကတ္တီပါဆက်စပ်ပစ္စည်း။ တစ်ဇိမ်ခံညနပေိုငျးတစ်ရှူး၏လှပသောအခွံနှင့်အတူလူကြိုက်အများဆုံးသံမဏိမော်ဒယ်တဦး။ ကတ္တီပါဒါကြောင့်ထိုထုတ်ကုန်တစ်လောကလုံးဖြစ်စဉ်းစားနေကြတယ်, နေ့စဉ်နှင့်ဖန်စီလေးအတွက်နှစ်ဦးစလုံးသည်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်။
တိပ်ခွေ။ တော်တော်နှင့်ဣတ္လေးကိုပိုး၏ကျယ်ပြန့်ချွတ်ဖြည့်စွတ်, ဖဲ, ပုံနှိပ်ဝါဂွမ်း။ သူ၏ခေါင်းပေါ်၌ရပ်တည်ရန် accessory, ဒီဇိုင်နာများတစ်ကတ်ထူပြားသို့မဟုတ်သစ်သားဘောင်ပေါ်တွင်တိပ် attach ။
ဇာအဆင်တန်ဆာ။ သင့်ရဲ့ပါလျှင် ပေါ့ပေါ့ နူးညံ့သိမ်မွေ့ရင်ခုန်စရာဦးတည်ချက်နှင့်တွေ့ဆုံသည်စတိုင်ရွေးချယ်မှုဇာ၏ထို့အပြင်လိမ့်မည်။ အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်အဖြစ်ရောင်စုံ openwork အဖြစ်လမ်းကြောင်းသစ်။ ဒီ option ကအောင်မြင်သောနှင့်ဣတ္လေးတို့သည်လည်းအထွက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကုလားကာနှင့်အတူ။ မျက်စိအပေါ်ကျယ်ပြန့်ပိုက်ကွန်ကိုအားဖြင့်ပြည့်စုံဆုံးမူရင်းနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သော considered ဒီဇိုင်း။ ဒါကလေးကိုအတွက်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်, ခေတ်မီခြင်းနှင့်သနျ့၏ Element တစ်ခုရဲ့ထပ်ပြောသည်။ stylist က output, ဒါပေမယ့်လည်းနေ့စဉ်ပေါင်းစပ်ထဲမှာမသာ, တစ်ဦးကုလားကာနှင့်တူညီသောပုံစံကိုအသုံးပြုပါ။
အရောင် finish ကိုလွင်လတ်ဆတ်, အပြုသဘောနှင့်ဣတ္၏ပုံသဏ်ဌာမှထပ်ပြောသည်။ ဤရွေ့ကားဆက်စပ်ပစ္စည်းပုလွမ်းသူ့ပန်းခွေတစ်ခုစတိုင်အခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်လာပါပြီ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, လမ်းကြောင်းသစ်တုပန်းပွင့်နှင့်အတူမော်ဒယ်, ဒါပေမယ့်အသက်ရှင်လျှက်သာဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခဏထုတ်ကုန်ပြည့်စုံခြင်းနှင့်အလှဆင်မြက်နေကြသည်။ ပန်းအနားကွပ်နှင့်အတူဆံပင်ပုံစံတွေကိုသင်ချောချောမွေ့မွေ့သို့မဟုတ်သေးငယ်ကြီးမားရှုပ်ထွေးနေသောဆံပင်ကောက်ကောက်ထဲမှာသင့်ရဲ့ဆံပင်ထည့်ထားနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာအခမဲ့ပုံစံအတွက်လှပသောကြည့်ရှုပါ။ စတိုင်ဖြေရှင်းချက်မြင့်မားပြီးကြီးပြင်းလာဦးရစ်သရဖူနှင့်အတူပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်၌သင်တို့ကိုနဖူးနှင့်ဦးခေါင်းအသံအတိုးအကျယ်၏နောက်ကျောအကြားနယ်နိမိတ်အောင်သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားသေးငယ်တဲ့ဘူးသီးနှင့်အတူလက်ျာဆက်စပ်ပစ္စည်းကိုရှာဖွေသင့်ပါတယ်။
မကြာသေးမီရာသီ၏ဖက်ရှင်လမ်းကြောင်းသစ်ဒါခေါ်သည့်သဘာဝကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဆက်စပ်ပစ္စည်းမရှိဘဲမာစတာကုန်ကျစရိတ်, ဒါပေမယ့်သူတို့ကဆံပင်ကနေတိုက်ရိုက်လုပ်ပါ။ လူကြိုက်အများဆုံး pigtail-အနားကွပ်၏ဆံပင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤတွင်, ဆံပင်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းကိုပြန် combed, နှင့်နဖူးကျစ်တိ, အသံအတိုးအကျယ်သို့မဟုတ်မသေချာသောဆူးများ၏လိုင်းတလျှောက်။ ထိုသို့သော stack ချောင်ဆံပင်ကောက်ကောက်ပါသို့မဟုတ်အမြီးမှလိုက်ဖက်, လေဆာရောင်ခြည် shell ကို strands နိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်စတိုင်ဖြေရှင်းချက်ခေါင်းကိုတံတွေးထွေးန်းကျင်ရှုမြင်သုံးသပ်ကြခံရဖို့စဉ်းစားသည်။ ဒီ option ကလေ့ကျင့်ရေးလှုပ်ရှားမှုများအဘို့, စီးပွားရေး၏လေးသည်အောက်မှာအပူအောင်မြင်သည်။
အလှဆင် finish ကို crystals နှင့်ကျောက်များနှင့်အတူကြော့နှင့်သန့်စင်ပြီးကြည့်။ ကြီးမားတဲ့အသံအတိုးအကျယ်ပုံစံမျိုးနှင့်ဒဏ်ငွေ placer ၏ဖွဲ့စည်းမှုအဖြစ်လမ်းကြောင်းသစ်၌တည်၏။ နေ့စဉ် wear များအတွက် stylist သေးငယ်တဲ့ Self-အရောင်သို့မဟုတ် Multi-ရောင်စုံကျောက်များနှင့်အတူဆက်စပ်ပစ္စည်းဒဏ်ငွေပုံစံရွေးချယ်ရာတွင်အကြံပြုပါသည်။ ဖန်စီလေးတို့သည်သဘာဝသို့မဟုတ်အဖိုးတန် crystals ၏အရောင်အတွက်ဖော်ပြပုံစံမျိုးဖြည့်ဖို့ကပိုသင့်လျော်ပါတယ်။ ခမ်းနားအလှဆင်ထုတ်ကုန်များအတွက်စုံလင်သည် တိုတောင်းသောခေါင်းဖီး ။ အဆိုပါအနားကွပ်နှင့်အတူဆံပင်-စတုရန်းအထူးသဖြင့်လူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါကျောက်များပန်းပွင့်, ပုလဲနဲ့ Forge နဲ့ပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။
ကြောင်နားရွက်နှင့်အတူဖြည့်ဆည်းခေတ်မီဖက်ရှင်သံမဏိလက်ဝတ်ရတနာများအတွက်စတိုင်ရှေးခယျြမှု။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, နှစ်ခုတြိဂံ၏နှစ်ဖက်ပူးတွဲထားတဲ့အပေါ်ဒဏ်ငွေအခြေခံ။ ထိုသို့သောမော်ဒယ်များတစ်ချောမွေ့ပြောင်လက်ဒီဇိုင်းနှင့်အလှဆင်ဇာ၏, သားမွေး, အမွေးအတောင်များနှင့်အခြားတိအတွက်တင်ပြနေကြပါတယ်။ utjuzhkom ကောက်သို့မဟုတ်ဆွဲထုတ်နိုင်သည့်စီးဆင်းနေသောသော့ခလောက်နှင့်အတူပေးအပ်အနားကွပ်ဖို့အလွယ်ကူဆုံးဆံပင်ပုံစံတွေ။ ပိုမိုရှုပ်ထွေးဖြေရှင်းချက်ယက်ခံရဖို့စဉ်းစားနေကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောဆက်စပ်ပစ္စည်းလူငယ်တစ်ဦးလေးကိုအတွက် fit လိမ့်မည်ဟုပေးထား, ထုပ်ပိုးပြီး strands ရောင်စုံနိုင်ပါသည် - milirovanie, အရောင်သို့မဟုတ် Ombre ။
ဝတ်စုံရတနာအထူးသဖြင့်မကြာခဏဂရိစတိုင်အတွက်စိတ်ကူးစဉ်းစားအသုံးပြုသည်အဘယ်မှာရှိလူကြိုက်အများဆုံးပုံစံ။ ဒီ option ကမည်သည့်အရှည်၏ဆံပင်အဘို့သင့်လျော်သည်။ သို့သျောလညျးကိုပိုမိုရှုပ်ထွေးပြီးမူရင်းစိတ်ကူးများရှည်လျားသောဆံပင်ကောက်ကောက်ထဲသို့သွင်းထားနိုင်ပါတယ်။ ဂရိဆံပင်ပုံစံတွေအဘို့အသွားဖုံး-bezel တင်သောယုံကြည်စိတ်ချရသောသော့ခတ်ပြုမူသောအမှု။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်ဆက်စပ်ပစ္စည်း, ပါးလွှာယက်, တစ်ခုတည်းနှစ်ချက်ပင်သုံးဆနိုင်ပါတယ်။ အလွယ်ဆုံးနည်းကတော့အပေါငျးတို့သ elastic အောက်မှာတွေထဲမှာအောင်းနေနိုင်ပါတယ်မည်ဖြစ်သည်။ ဂရိစတိုင်တသမတ်တည်းနှင့်မြင့်မားအခမဲ့ကောက်လှိုင်း။ ထိုအခါရှုပ်ထွေးသော၏အရှည်အလေးပေးဖို့တံတွေးထွေးဖို့ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
stacked ဆံပင်အရမ်းသဘောကောင်းတာပဲပါးလွှာနှင့်ကျယ်ပြန့်နှစ်ဦးစလုံးကွင်းနှင့်အတူပေါင်းစပ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျရောင်စုံဖဲကြိုးကိုသုံးနိုင်သည်။ စတိုင်များအပြင်အဲဒီမှာတစ်ခုမူရင်းဖြစ်နှင့်တစ်ဦးလေးကိုကြိုးနဲ့တုတ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါခေတ်မီစတိုင်လွယ်ကူသောပေါ့ဆမှုနှင့်ပရမ်းပတာကိုကြိုဆိုသည်။ ထို့ကြောင့်, ဆံပင်တစ်ချိန်တည်းမှာကြီးမားပြီးသေးငယ်တဲ့ဆံပင်ကောက်ကောက်ထဲမှာခွေသငျ့သညျ။ သင်တဦးတည်းအခြမ်းအပေါ်ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းရွေးကောက်သဖြင့်, ဆံပင်ဘေးထွက်မှ combed နိုင်ပါသည်။ အကယ်. ထူးအိမ်သင် hoops volume ကိုဦးရစ်သရဖူနှင့်အတူ styling ၌ကြီးသောကြည့်ရှုပါ။ သငျသညျဆံပင်တစ်ဦးသည်အလွန်ထူသောဦးခေါင်းရှိပါကနှင့်အညီ, သင်တို့အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောဖြေရှင်းချက်တစ်ဦးရော်ဘာလက်စွပ်နှင့် hairdo မည်ဖြစ်သည်။
ညနေပိုင်းတွင်ကြက်သွန်နီအတွက်ခေတ်မှီဖြေရှင်းချက်တစ်ကွင်းနှင့်အတူဆံပင်ကောက်ကောက် styling လိမ့်မည်။ ဤသည်ဂျဆံပင်အခမဲ့ရောင်ခြည်၌အခြားသော၏ထိပ်ပေါ်မှာတင်ကြ၏ဖြစ်ပါတယ်တစ်ဦးချင်းစီ၏သုံးပိုင်းသို့ခှဲဝေသည်အဘယ်မှာရှိမြင့်မားသော combed ပုံစံအတွက်ကိုယ်စားပြုနေသည်။ ညင်ညင်သာသာသူမ၏ဆံပင်ကောက်ကောက်ထားကွ၏တစ်ဦးအခမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်တင်ပြဘီးဝန်းနှင့်အတူလှပသောဆံပင်ပုံစံတွေ။ ဖန်စီများအတွက်အမှန်တကယ်ရွေးချယ်ရေးပန်းပွင့်နှင့်ကျောက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေနဲ့အလှဆင်ပါလိမ့်မည်ငန်းရှင်များ။ စားဆင်ယင်, ပိုက်ဆံအိတ်, ဖိနပ် - ထိုအလှဆင်တဦးတည်းကိုပိုမိုဒြပ်စင်များ၏သေံအတွက်တာဝန်ရှိသည်လျှင် ensemble သဟဇာတဖြစ်လိမ့်မည်။ အလွတ်သဘောအခါသမယများအတွက်, သငျသညျဆံပင်ကိုင်ဆောင်သူများသော့ခတ်ပိတ်, အမြီးစေနိုင်သည်။
ခေတ်သစ်မင်္ဂလာဆောင်ဖက်ရှင်ကွင်းအစားပန်းပွင့်ရဲ့ဂန္လွမ်းသူ့ပန်းခွေများအသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့်အများဆုံးအရေးပေါ်အလှဆင်ပန်းပုံစံများထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြသည်။ သင့်ရဲ့ image ကိုနူးညံ့သိမ်မွေ့အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်လျှင်သို့သော် ရင်ခုန်စရာစတိုင် , ဦးခေါင်းတစ်ခုစတိုင်ထို့အပြင် crystals သို့မဟုတ်ကျောက်ခဲနှင့် tiara အတုဖြစ်ပါတယ်။ ထုံးစံမင်္ဂလာဆောင်အတွက်အကောင်းဆုံးများထဲမှဇာဆက်စပ်ပစ္စည်းစဉ်းစားသည်။ သတို့သမီး stacking ခေတ်မီစတိုင်နှင့်စိမ်းလန်းစိုပြေကြိုဆိုအမြောက်အများ၌တည်၏။ သို့သျောလညျးအဆင်းလှသောထုပ်ပိုးပြီးမြင့်မားတဲ့ဆံပင်ပုံစံတွေအဘို့သင့်လျော်သည်။
အလတ်စားဆံပင်များအတွက်မင်္ဂလာဆောင်ဆံပင်ပုံစံတွေဟာ elastic strands အောက်မှာတွေထဲမှာအောင်းနေနိုင်ပါတယ်, ဂရိစတိုင်တင်ပြနေကြပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အမှန်တကယ်ရှေးခယျြမှုပုံစံမျိုးဘက်နှင့်အတူအလှဆင်ဖြစ်ပါတယ်။ တိုတောင်းသောဆံပင် stylist ကျောက်ကြီးမားတဲ့ပန်းပွင့်သို့မဟုတ်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်အတူပါးလွှာကွင်းပေါ်နေဖို့အကြံပြုနှင့်အတူမိန်းကလေး။ သင့်ရဲ့ image ကိုမှမူလအစနဲ့နက်နဲသောအရာနူးညံ့သိမ်မွေ့ကုလားကာထည့်ပါ။ ထိုအခါဣတ္နှင့်ယဉျကြေးမှုကိုအလေးပေးခြင်းငှါ, ကွင်းကုလားကာကိုတိုက်ရိုက်ကျောထောက်နောက်ခံ။ သို့သော်ဤအမှု၌ကချောမွေ့တပ်ဆင်ခစေရန်လိုအပ်ပေသည်။
မျက်နှာကိုအဘို့အလှကုန်ရွှံ့ - အဘယ်အရာကိုရွေးချယ်သနည်း
စာရွက် - အေးစက်နေတဲ့ချယ်ရီသီးနှင့်အတူဖက်ထုပ်
ပြည်သူ့ထင်မြင်ချက် - အများပြည်သူထင်မြင်ချက်၏ခြယ်လှယ်၏နည်းလမ်းများနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတိ
အဆိုပါကလေးသည်ဗိုက်နာရှိပါတယ် - ဘာလုပ်ရမှန်း?
ရွှေဖရုံသီးသီးဖျော်ရည် - အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ပျက်ဆီး
ကျားသစ်စကတ်ဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?